Mandehandeha sy mijanona amin'ny endrika: lafiny roa amin'ny vola madinika mitovy | Vaovao momba ny dia
Mandehandeha sy mijanona amin'ny endrika: lafiny roa amin'ny farantsakely iray ihany
Vaovao momba ny dia | | Tsangatsangana
Ny fitsangatsanganana dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahitana, hianarana ary hahafantarana izay mitranga any amin'ny faritra hafa amin'ny planeta. Noho izany, tsy mahagaga raha mihamaro ny olona mandany ny fialan-tsasatra sy fotoana malalaka hiakarany amin'ny fiaramanidina ary hanao dia manokana. Fa, ho fanampin'izay, ny fitsangatsanganana dia tsy fialan-tsiny tonga lafatra fotsiny mba hiala sy miverina miaraka amin'ny bateria voampanga. Ity fahazarana mihanaka ity dia, ho an'ireo tia fanatanjahan-tena, ny fitambarana tonga lafatra eo amin'ny fitsaharana sy mankafy ny fialambolinao.
Noho io antony io, rehefa tonga ny fararano ary manakaiky ny hatsiaka isika, ny fialantsasatra tonga lafatra ho an'ny mpanao fanatanjahantena indrindra dia ao ambadiky ny Tolotra ao Caldea miaraka amin'ny Esquiades.com.
1 Espana: firenena fizahan-tany, ho an'ny Espaniola ihany koa
2 Fizahan-tany amin'ny ririnina: ny fanatanjahantena indrindra
3 Fa maninona no malaza be ny ski amin'ny fialan-tsasatra?
Espana: firenena fizahan-tany, ho an'ny Espaniola ihany koa
Ny isan'ny dia ataon'ny Espaniola dia mitombo isan-taona. Ny 2018 lasa dia ohatra tsara amin'izany hatramin'ny nifaranan'ny taona tamin'ny isa firaketana. Araka ny fanadihadiana nataon'ny Resident fizahan-tany nomen'ny National Institute of Statistics isan-taona dia 197,3 tapitrisa ny dia nataon'ny olona monina ao Espana. Ireo tarehimarika ireo dia maneho a fitomboan'ny efa ho 2% raha oharina tamin'ny tamin'ny taon-dasa. Amin'ireto dia ireto dia 90% mahery no natao tao anatin'ny faritry ny Espaniôla, izay manasongadina ny fisian'ny lojika sasany: Espaniôla koa dia Espaniola, tany fizahan-tany sy fialamboly. Ny tena marina dia manana harena ara-kolontsaina, ara-tantara, be mpampiasa, gastronomika ary fanatanjahantena lehibe ny firenentsika. Ity karazana farany ity dia iray amin'ireo famaky lehibe amin'ny fizahan-tany, mipoitra haingana tato anatin'ny folo taona. Porofo mivaingana amin'izany ny vanim-potoana fialantsasatry ny Krismasy, izay anaovany izany Mandeha an-tanana ny fanatanjahan-tena sy ny lanezy.
Fizahan-tany amin'ny ririnina: ny fanatanjahantena indrindra
Topazo maso fotsiny Esquiades.com hijerena ny fifampiraharahana amin'ny fararano sy ny ririnina no filaharan'ny andro. Fa koa, ireo fialantsasatra ireo dia mifandray akaiky amin'ny fanatanjahan-tena. Asehon'ireto tarehimarika ireto: ny isan'ny mpitsidika ny toeram-pialan-tsasatra Espaniôla dia 5,8 tapitrisa tamin'ny taon-dasa, araka ny fanadihadiana iray nomanin'ny Tourist Association of Ski and Mountain Resorts. Ireo data ireo dia maneho fiakarana isan-taona mihoatra ny 7%. Ka iza no nilaza fa tsy afaka manao vakansy ianao ary milalao fanatanjahantena miaraka amin'izay?
Fa maninona no malaza be ny ski amin'ny fialan-tsasatra?
Amin'ny tranga manokana amin'ny ski, ny antony mahatonga ny faniriana hampihatra azy dia maro karazana sy isan-karazany, manasongadina eo amin'izy ireo ny tombony entin'ny fanatanjahantena ity ho an'ny olombelona. Ireto ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra:
Ny fanapahana entiny: ny fanapahana sy ny fandosirana matetika dia iray amin'ireo tanjona napetraky ny olona maro ho azy ireo amin'ny fialan-tsasatra ataony. Amin'io lafiny io, ny ski dia aseho ho safidy tena mahomby. Tsy noho ny fisintahana tafiditra amin'ny fampiharana fanatanjahan-tena satria mila fifantohana lehibe, fa koa, ny zava-misy mifindra any amin'ny toerana nofinofy, rakotry ny lanezy sy eo afovoan'ny natiora, dia mahatonga antsika hamorona zana-kazo amin'ny fanaontsika andavanandro, matetika starring adin-tsaina sy andraikitra. Ity fahatsapana ity dia sarotra kokoa ny manatratra raha manao fanatanjahan-tena, ohatra, isika ao amin'ny gym na varavarana mihidy. Aorian'ny fialantsasatra ataontsika dia manomana antsika amin'ny fiverenana amin'ny fahazarana amin'ny famoahana batterie isika.
Ny fahatsapana fiadanam-po: ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena dia mitondra andianà fahatsapana tena manokana. Mandritra ny fahombiazany dia afaka mahatsapa ny fiakaran'ny adrenalinina sy ny fomba fisondrotana vaovao isika. Toy izany koa, rehefa vita, ny fanazaran-tena amin'ny fanatanjahan-tena dia matetika manome antsika fahatoniana sy fahasalamana izay sarotra tanterahana amin'ny fomba hafa. Tsy isalasalana fa izany no iray amin'ireo antony lehibe tian'ny olombelona mandany ny ampahany amin'ny fotoana malalaka anaovantsika amin'ny fanatanjahan-tena. Ho fanampin'izany, ny fanatanjahan-tena dia mamela antsika hanana fanamby napetraka, izay tena mahafa-po tokoa rehefa miresaka izany.
Fanatsarana ny fahasalamantsika: ny fahasalamana dia iray amin'ireo laharam-pahamehana hatrany amin'ny fiaraha-monina. Izany no mahatonga ny ahiahy momba ny tsy harary sy ny fahasalamana dia lehibe tokoa. Ho an'ity, maro ny olona lasa manao fanatanjahantena, ity dia iray amin'ireo antoka lehibe amin'ny fahasalamantsika. Raha ny fanaovana ski, eo am-panazaranay azy io dia manamafy ny fahaizan'ny taovam-pisefoantsika isika, manala ny hozatra izay henjana amin'ny fanazaran-tena, manatsara ny rafi-piaramanidina, sns.
Mahita toerana vaovao: misy toerana mahafinaritra izay sarotra idirana raha tsy manao spaoro isika. Raha ny fanaovana ski dia mazava ho azy. Amin'ny alàlan'ny mitaingina ski fotsiny no ahitantsika ireo sary mahafinaritra amin'ny ririnina, izay tsy azo idirana amin'ny fiara mihitsy. Ho fanampin'izany, mamela antsika hifandray amin'ny natiora amin'ny endriny madio indrindra izy ary hahafantatra ny flora sy ny biby ao aminy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » Mandehandeha sy mijanona amin'ny endrika: lafiny roa amin'ny farantsakely iray ihany
Ezcaray, fialantsasatra kely any ambanivohitra